ADY AMIN’NY HOSOKA : Tsy hanaiky ny fitsetsefana ny hatsembohany intsony ireo mpamokatra horonantsary
Mitobaka eny an-tsena sy eny amoron-dalana ankehitriny ireo kapila manjelatra mirakitra hira sy sarimihetsika vita malagasy. 5 juin 2018
Tsy misy tsy ahitana izany ary tsy miafina fa mibaribary sy miantsoantso mihitsy ireo mpivarotra. Efa entana hosoka avokoa anefa ny ankamaroan’ny zavakanto amidy hita eny rehetra eny toy ny hira, ny jeu video ary ny horonantsary. Manoloana izany tsy mitazam-potsiny fa mandray fepetra ireo tompon’andraikitra amin’ny fametrahana ny paikady maharitra hisorohana ireny hosoka, izay amidy amin’ny vidiny latsaka amin’ny tokony ho izy ireny.
“Tsy hoekena intsony ny fitsetsefana ny asa vokarin’ny hafa ka ireo tsy manara-dalàna indray no hahazo tombony.”, araka ny fanazavan’ny talen’ny Omaci, Randriamitandrinarivo Bon-Temps, ny alakamisy lasa teo teny Anosy.
Etsy an-daniny, misy ny fiaraha-miasa amin’ireo borigady miady amin’ny fanaovana hosoka. Isan’andro ny fidinana an-tsehatra mandeha misambotra ireo mpanao hosoka ary misy hatrany ireo tratra.
“Isan’andro no misy ny fisamborana ireo mpanao hosoka. Samborina izy ireny ary atao famotorana avy eo. Aorian’izay dia haterina eny amin’ny Fitsarana. Ireo efa voasambotra hatramin’izay dia saika notanana am-ponja vonjimaika any amin’ny fonjan’Antanimora. Hatreto aloha dia mbola tsy nisy ny antontanisa nivoaka amin’ny mety ho isan’ireo efa voasamboatra fa isan’andro dia misy foana ny fisamborana”, hoy hatrany ny fanazavana.
Nisy ny fivoriana niarahana tamin’ireo mpamokatra horonan- tsarimihetsika izay nanangonana sonia mba hiadiana amin’ity hosoka izay fanetriben’ny famokarana sy ny soatoavina malagasy ity. Niara-nikaondoha tamin’izany ireo mpamokatra sy mpilalao sarimihetsika izay nitondra ny hetaheta, ny solontena teo anivon’ny Fitsarana, ny avy amin’ny minisiteran’ny lolontsaina ary ry zareo ao amin’ny Omaci, izay miaro ny zon’ny mpamorona zavakanto eto amintsika.